Home News War Cusub:-R/wasaare Kheeyre oo Mooshin laga Gudbiyay Iyo Xildhibaanada oo Go’aan adag...
War Cusub:-R/wasaare Kheeyre oo Mooshin laga Gudbiyay Iyo Xildhibaanada oo Go’aan adag qaatay!!
Xiilldhibaaano ka tirsan Golaha shacabka ee Baarlmaanka soomaaliya ay u gudbiyeen Guddoonka Golaha Shacabka Mooshin u yeerid ah Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Mooshinkan oo ay saxiixday Illaa 23 Xildhibaan ayaa waxaa lagu dalbaday inuu Xasan Cali Kheyre Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya uu hortago xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka soomaaliya.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Guddoonka ay ka dalbadeen Xildhibaanada Mooshinka saxiixay in la siiyo waqti si loogu soo daro soo jeedintaasi ajandaha Baarlamaanka.
Saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ayaa Xildhibaanada Golaha Shacabka waxaa
Kheqay dood kulul ka lahaayeen amniga dalka, iyadoo eedeymo culus u jeediyay Xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal oo ka hadlayay gabagabadii dooda amniga ayaa sheegay in 50 xildhibaan ay ka hadleen aragtidooda iyo wixii talooyin ay soo jeediyeen la qoray, waxaana uu tilmaamay in arrinta ay u xilsaareen Guddiyada Difaaca iyo Amniga Golaha Shacabka, si warbixin waafi ah ay ugu keenaaan.
Previous articleWasiirka waxbarashada XFS oo Nairobi kula kulmay xubno ka tirsan hay’addaha deeq bixiyaasha
Next articleAskari Mooto Bajaajle oo Maxkamad lasoo taagay
Ciidamada Galmudug oo dib u habeeyn iyo Diiwaan-gelin lagu sameeynaayo
Magaalada Gaalkacyo oo Laga Joojiyay Xaflad Lagu Buunbuninayay Raisul Wasaare Kheyre&Lacago...